Maxaa sababay in Luuqad jirtay ay hadda saddex ruux oo kaliya ku hadlaan? - BBC News Somali
Raggan waxay aaminsan yihiin in luuqaddu ay la dhiman doonto
Badeshi waxay ahaan jirtay luuqad si weyn looga hadlo deegaanno ku teedsan dooxo uu baraf ka da'o, oo ku taalla dhulka gudaha hoose ah ee buuraleyda waqooyiga dalka Pakistan.
Laakiin hadda waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday iney tahay luuqad dabar go'day.
Hay'ad lagu magacaabo Ethnologue oo diiwaan galisa luuqadaha looga hadlo caalamka ayaa sheegtay in aysan la kulmin dad la yaqaanno oo ku hadla afkaas ilaa saddex jiil oo lasoo dhaafay ama ka badan.
Saddex qof oo kaliya ayaa ku hadasha
"Hal jiil ka hor, Badeshi waxaa looga hadli jiray xaafadda oo idil", ayuu yiri Raxiim Gul.
Isagu hadda ma yaqaanno da'diisa, laakiin wuxuu u muuqdaa inuu yahay 70 sano jir.
"Laakiin markii dambe waxaan deegaanka keennay haween ka soo jeeda deegaan kale, oo aan soo guursannay, waxayna haweenkaas ku hadlayeen luuqadda Torwali. Carruurtii ay dhaleen waxay qaateen afka hooyooyinkood, sidaas awgeed luuqaddeennii waxay billowday iney baaba'do", ayuu yidhi.
"Hadda carruurteenna iyo carruurtii ay sii dhaleen waxay ku hadlaan Torwali, marka yaan kula hadalnaa afkeennii?", waxaa sidaas yidhi Saciid Gul oo ay ilmo adeer yihiin Raxiim Gul.
'Waan ka qoomameynayaa'
Luuqaddan waxaa loo aqoonsaday iney dabar go'day
"Hooyadey luuqaddeeda waxay ahayd Torwali, sidaas darteed waalidkeyga inta ay guriga joogaan kuma aysan hadli jirin Badeshi. Ma helin fursad aan luuqadda kor ugu qaado intii aan carruurnimada ku jiray. Dhowr eray unbaan aqaannaa, laakiin ma garanayo luuqadda. Carruurteyda oo idilna waxay ku hadlaan Torwali.
"Waan ka qoomameynayaa, laakiin hadda maadaama aan 32 sano jir ahay, fursad uma heysto inaan barto Badeshi. Aad baan uga murugaysanahay in luuqaddan ay la dhiman doonto aabahay", ayuu yidhi.
Meen naao Rahim Gul thi - Magaceygu waa Rahim Gul
Meen Badeshi jibe aasa - waxaan ku hadlaa luuqadda Badeshi
Theen haal khale thi? - Sidee tahay?
May grot khekti - Waan cunteeyay
Ishu kaale heem kam ikthi - Baraf badan ma dhici doono sannadkan
Dood ka dhalatay in xarumaha ganacsiga la xiro marka la gaaro wakhtiga salaadda